Ivon'ny faha-150 taonan’ny EKAR NDSC Ambavahadimitafo
FANKALAZANA MANETRIKETRIKA NO NANAMARIHANA IZANY
« Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa fa manohitra ny mpiavonavona Andriamanitra, ary manome fahasoavana ny manetry tena ». Izany teny nalaina tao amin’ny I Piera 5 : 5 b izany no teny fanevan’ny fankalazana ny faha-150 taonan’ny EKAR Notre Dame du Sacré Cœur Ambavahadimitafo. Ny Alahady 26 May 2013 teo no nanatanterahana ny ivon’ny fanakalazana ny jobilin’ny faha-150 taonana niorenan’izany fiangonana izany, tamin’ny alalan’ny Sorona Masina lehibe izay notarihan’ny SEM Razanakolona Odon Marie Arsène, Arsevekan’Antananarivo, notronin’ireo pretra maro efa nandalo sy niasa taloha tao an-toerana. Tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity ihany koa ny olo-manan-kaja maro toy ny solontenan’ny Praiminisitra sy ny solontenan’ny PDS-n’Antananarivo, Andriantsilavo Zo.
Tao anatin’izany Sorona Masina lehibe izany dia nisy ny fandraisan’ireo tanora folo mianadahy ny Sakramentan’ny Fankaherezana. Mpivady roa ihany koa no nankalaza ny jobilin’ny fanambadianafaha-25 sy 50 taona. Nomena voninahitra manokana sy notsofina rano koa ireo raiamandreny efa zokiolona mihoatra ny 70 taona ary notolorana taratasy mari-pankasitrahana. Anisan’ny nanamarika ny fanakalazana ny faha-150 taonan’ny EKAR NDSC Ambavahadimitafo ihany koa ny nanaovana ny hira faneva. Tamin’io andro ary no nanolorana azy mianadahy namorona ny tonon-kira sy ny feony ny taratasy mari-pankasitrahana.Maro ny ezaka natao hanatsarana ny fiangonana na anatiny izany na ivelany, toy ny fanavaozana ny loko, ny fanavoazana ny “tribune”, ny fanamboarana ny otely sy ny lalantsara anatiny ho lasa “carreaux” ary ny fametahana ny takelaka famantarana ny fiangonana, izay sambany vao nisy. Tamin’io andro io no nitsofan-drano manokana ireo asa fanatsarana vita tao an-toerana ireo.Notsofina rano tamin’izany ihany koa ireo fitoavana vaovao maro isan-karazany, toy ny tapis, ny lamba, ny seza... Marihina fa izao fanatsarana sy fanavoazana goavana hita mavaingana izao no tontosa dia vokatry ny fifanomezan-tanana teo amin’ny Faritra 4, ny Fikambanana Masina isan-tsokajiny ary ny fianakaviana tsirairay avy.
Mbola maro ny vinavina
Na dia maro aza ny ezaka natao hanatsarana sy hanomezana aina vao indray ny fiangonana NDSC Ambavahadimitafo dia mbola betsaka ihany koa ny vinavina nokasaina hatao ao anatin’ny fankalazana ny faha-150 taonan’ny fiangonana. Anisan’ireny ny hamerenana indray ny Sekolin’ny Paroasy, izay marihina fa efa nisy teo aloha kanefa dia narodan’ny rivodoza. Zava-dehibe tokoa ny hananana io sekoly io mba ho lova ho an’ny taranaka aoriana. Lavitr’ezaka ihany anefa izany, ka mangataka ny fanampian’ireo malala-tanana ny kristianina rehetra sy ny mpitondra ao amin’ny Paroasy mba hanohana azy ireo amin’izany.
Fiangonana katolika nioriina fahatelo
Ny EKAR Notre Dame du Sacré Coeur Ambavahadimitafo no fiangonana katolika niorina fahatelo teto Antananarivo ny taona 1863, taorian’ny Katedraly Immaculée Conception Andohalo ny taona 1861 sy ny EKAR Fo Masin’I Jesoa Ambohimitsimbina ny taona 1862. Anisan’ny fiangonana miavaka sy manana ny maha-izy azy ity fiangonana ity na dia somary kelikely ihany aza. Ny rafitry ny hazo rehetra ao anatiny dia “style gothique” avokoa. Ny lohan’ny otely dia misy ny antsoina hoe “Dôme de Notre Dame du Sacré Coeur”, izay ijoroan’i Masina Maria Tompon’ny Fo Masin’i Jesoa. Io no endriky ny Fiangonana tany am-piandohana izay mbola voatazona sy voatahiry ankehitriny.
Ny EKAR NDSC Ambavahadimitafo dia fiangonana miorina amin’ny toerana somary an-tampon-kavoana. Raha avy any amin’ny Rova Manjakamiadana no miainga dia midina ary mandalo ny fitsarana taloha Ambatondrafandrana. Manaraka ny lalana vato ary mandalo ilay vavahady mitafo izay nantsoin’ny vazaha fahiny hoe “la porte coiffée d’un toit”. Vao afaka kelikely io vavahady mitafo io dia mahita fiangonana kelikely iray, io no Notre Dame du Sacré Coeur.
Namokatra Eveka sy Pretra maro
Anisan’ny Fiangonana namokatra Eveka sy Pretra maro ny NDSC Ambavahadimitafo. Anisan’ireny ny Kardinaly Malagasy voalohany, Rakotomalala Jérôme, ny Kardinaly Razafindratandra Armand Gaëtan, izay efa nitantana ny Paroasy ihany koa tamin’ny taona 1970, teo ihany koa ny Pretra Ravelomanantsoa Jean Pierre, izay manaraka fiofanana mandritra ny taona vitsivitsy any Italie amin’izao fotoana. Raha aravona dia teo amin’ny 33 ny isan’ireo Pretra nifandimby nitantana ny Paroasy nandritra izay 150 taona izay. Amin’izao fotoana dia I Mompera Rabemanontany Albert no Pretra mitantana ity Fiangonana ity.
Filoham-piangonana maro no nifandimby
Maro ihany koa ireo Filoham-piangonana nifandimby tao anatini’zay 150 taona izay, misy ireo efa nodmandry, maro ihany koa anefa ireo mbola velona. Anisan’ireo efa nodimandry Itompokolahy Rajaonarivo Venance (1961-1967), Itompokolahy Randrianarivelo Charles Vincent de Paul (1967-1971), Itompokolahy Rajaonarivo Claude (1971-1994). Ireo Filoham-piangonana mbola velona dia ahitana an-dRatsimbazafy Serge (1994), Rasoamiarandranto Julie (1994-2002), Rabakoson Fabien (2009-2012) ary Randriantsoa Jean Christian, izay filoham-piangonana nanomboka ny taona 2012 ka hatramin’izao.
Ny fiangonana tranainy toy ny Notre Dame du Sacré Coeur Ambavahadimitafo toy itony dia vakoka ka tokony ho arovana sy ho ampiana mba ho lova hipetraka sy ho dimbiasan’ny mpino any aoriana indray.
Sary sy soratra : Nanouh